LOVE ISLAND 2017 သွန်းလောင်းခြင်း - LOVE ISLAND 2017 သွန်းလောင်းသည့်နေရာယခုဘယ်မှာရှိသနည်း - သတင်း
Love Island 2017 သွန်းလောင်း: သူတို့အဘယ်မှာရှိသနည်း
ဒီတစ်ခါတော့မနှစ်ကမနက် ၉ နာရီမှာညတိုင်းမနက်ခင်းမှာထိုင်ကြရတယ် Love ကျွန်း 2017 သွန်း။ ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည် Stretcher နှင့် ဂျေမီ ဆက်ဆံရေးအပွင့်, ခရစ်နှင့်အဘယ်သို့ hijinks ကြည့်ပါ Cream ဒီအချိန်အထိပါပြီ
နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဟာ villa ကနေ Instagram ကကမကထပြုထားတဲ့ content တွေထဲကငွေတွေထဲကိုခုန်ထွက်လာပြီးထွက်လာကြတာပါ။ ရံဖန်ရံခါသူတို့သည် Tablo များတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်လုပ်လိမ့်မည် ကလပ်အသွင်အပြင် မင်းရဲ့ဇာတိမြို့မှာဖြစ်ပေမယ့်ငါတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်း၊ လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ဘစ်စုပ်နဲ့ ABS စကားပြောတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါ Love Island 2017 သွန်းလောင်းရာမှာဘာဖြစ်လာပြီလဲ။
သူတို့ဟာ Instagram ကိုငွေတွေများများရနေတုန်းပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ်အခုသူတို့အိမ်မှာထိုင်နေတာလား၊ ငါတို့လိုအခြားပြပွဲကိုကြည့်နေသလား။
Jess - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ် (နေ့ ၁၇)
ပြပွဲမှထွက်သွားပြီးနောက်တွင်၊ မိန်းကလေးများကမဲပေးပြီးနောက်ဂျက်စ်နှင့်ဒိုတို့သည်စေ့စပ်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ် Valentine's Day မှာသူတို့နှစ် ဦး ဟာတရားမ ၀ င်လက်ထပ်ပြီး Good Morning ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အတွင်းခံအဖြူရောင် ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ထားပြီးဂရိ၌ယခုနွေရာသီတွင်ကျင်းပမည့်တရားဝင်မင်္ဂလာပွဲအတွက်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ထားသည်။
Jess နှင့် Dom တို့သည်အတူတကွပြောင်းရွှေ့လာကြပြီးလက်ထပ်ပြီးမကြာမီကလေးယူရန်အစီအစဉ်ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်။
iv အတူတူယိုသောစုံတွဲများအတူတကွနေကြသလား JOKES ️ Dom သို့သော်နွေရာသီအတွက်သူတို့ကိုယ်ပိုင် iv drips များနှင့်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ရန် Dom နှင့်ကျွန်ုပ်သည် @woneknightsbridge သို့အခြားတစ်နေ့တွင်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒီအရာတွေကအံ့သြစရာကောင်းတယ်
မျှဝေသည် ဂျက်စီကာနှင်းဆီ 7:29 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 5, 2018 ရက်တွင် (@jessica_rose_uk)
Camilla - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - အပြေးသမား (နေ့ ၅၂)
ကျွန်းမှထွက်ခွာပြီးကတည်းကဂျီမီနှင့် Camilla တို့၏ဆက်ဆံရေးသည် ဆက်၍ ပွင့်လန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လူသိများသောအလှကုန်လက်ဝယ်ရှိသူ“ Look Fantastic” သည်ဆံပင်နှင့်အလှအပထုတ်ကုန်များကိုမြှင့်တင်ရန် Camilla ကိုပေါင် ၅၀၀,၀၀၀ ဖြင့်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူမ၏အလုပ်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများသည်ဘဝကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သည် ။
@cathkidston_ltd မီးဖိုချောင်ကိုလိုချင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏မီးဖိုချောင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏နံနက်ကော်ဖီထဲ၌ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရှိသောတဒင်္ဂတကာလေးသည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနိုင်သည်။ C # CKAW18
မျှဝေသည် Camilla Thurlow 4:47 pm တွင် PDT မှာဇွန် 6, 2018 ရက်တွင် (@camillathurlow)
Olivia - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - တတိယနေရာ (နေ့ ၅၂)
Olivia သည် Love ကျွန်းကိုအပြင်းအထန်အပြင်းအထန်စွန့်ခွာခဲ့ပြီး Olivia ၏ပေါင် ၉၀၀,၀၀၀ ယူဆောင်လာသည့် Crackin 'On ဟုခေါ်သည့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Olivia သည် ITV အကြီးအကဲအချို့နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်သူမ 'ငါ A Celebrity' ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန်အလားအလာကိုပြောဆိုခဲ့သည်။
ငါဒီဝတ်စားဆင်ယင်နှင့်၎င်း၏ယခုအွန်လိုင်း @prettylittlething (ငါ့ဇာတ်လမ်းအတွက် link ကို) #PLT နှင့်ပတ်သက်။ soooo မေးခွန်းများအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်? #ad
မျှဝေသည် Olivia ကျောက်စိမ်း Attwood ???? 11:59 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 6, 2018 ရက်တွင် (@oliviajade_attwood)
ပယင်း - ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - အောင်မြင်သူ (နေ့ ၅၂)
Amber သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်းမှထွက်ခွာခဲ့ပြီး Kem နှင့်လက်တွဲခဲ့သည်။ လေးလကြာချိန်းတွေ့ပြီးနောက်သူတို့နှစ် ဦး လုံးသည်အရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကလေး me ငါ့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်
မျှဝေသည် Amber Davies ✨ 12:11 pm တွင် PDT မှာမေလ 29, 2018 ရက် (@amb_d)
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့သော်လည်းပျက်စီးခြင်းနှင့်မှောငျခွငျးဖြစ်ခဲ့သည်။ Villa မှထွက်ခွာပြီးကတည်းက Amber ၏လုပ်ငန်းသည် ဆက်၍ တိုးတက်ခဲ့သည်။ သူမသည် Good Morning ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်တစ်ခြားနာရီများ၌ပေါင် ၅၀၀၀ ခန့်ကောက်ခံနိုင်သည့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသွင်အပြင်များနှင့်အတူသူမအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Amber သည်အဓိကဖက်ရှင်တံဆိပ်များစွာမှဝယ်လိုအားအလွန်များသော်လည်း MotelRocks နှင့်£ 500k စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
မျှဝေသည် Amber Davies ✨ 12:02 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 5, 2018 ရက်တွင် (@amb_d)
ခရစ် - အချစ်ကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - တတိယနေရာ (နေ့ ၅၂)
ခရစ်သည် Love Island မှထွက်ခွာပြီးနောက်သူသည်ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဘက်နှင့်သူငယ်ချင်း Kem တို့နှင့်အတူ 'Straight Out Of Love Island' ပွဲစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ခရစ်နှင့်ကင်တို့သည်ကျွန်းမှထွက်ခွာပြီးနောက်အတူတကွတေးဂီတကိုဖွင့်ပြကာ“ Little Bit Leave It” ဇယားကွက်ထိပ်ဆုံး single တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Olivia နှင့်အတူခရစ်သည် Crackin 'On ဟုခေါ်သောသူ၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်မှန်တီဗွီပြသမှုကိုဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ဆက်နွယ်မှု၏ကောင်းကျိုးများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
မျှဝေသည် ခရစ် Hughes 1:11 pm တွင် PDT မှာမေလ 6, 2018 ရက်တွင် (@chrishughesofficial)
ခရစ်နှင့်ကေ၏လှောင်ပြောင်သရော်မှုများသည်ဤတွင်မရပ်ပါ။ Impractical Jokers နှင့်ဆင်တူသည့်တီဗီရှိုးအသစ်တစ်ခုတွင်သူတို့ကရယ်စရာကောင်းသောစိန်ခေါ်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမသတ်မှတ်ကြဘူး၊ အဲဒါကိုဂရုစိုက်တဲ့ပရိသတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
မကြာသေးမီကခရစ်သည်သူ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ (You Bantering Me?) ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူ၏စုရုံးလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ပေါင်တစ်သန်းရရှိခဲ့သည်။
မွန်တာနာ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ် (နေ့ ၅၀)
Love Island မှထွက်ခွာပြီးနောက် Montana သည်ဤမနက်ခင်း၌ဖက်ရှင်တင်ဆက်သူအဖြစ်အထင်ကြီးလောက်သောအခန်းကဏ္uredမှရရှိခဲ့သည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူမရဲ့ချိန်းဆိုမှုကိုကြည့်ရှုသူတွေကသိပ်မလက်ခံကြတဲ့အတွက်သူ့ဘ ၀ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဟာလျင်မြန်စွာအဆုံးသတ်သွားတယ်။
သူမသည်သော်လည်းပြန်ခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့ပြီး MTV သတင်းတင်ဆက်သူတစ် ဦး အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
မင်းတို့အားလုံး glammed လုပ်ပြီးမင်းရဲ့ Uber driver ကမင်းဘယ်မှာနေနေမှန်းသိပေမဲ့လမ်းဆုံးအထိလမ်းလျှောက်သွားအောင်လုပ်တဲ့အခါ ??
မျှဝေသည် Montana ဘရောင်း 12:06 pm တွင် PDT မှာမေလ 31, 2018 ရက်တွင် (@ montanarosebrown1)
မကြာသေးမီလများကသူသည် X Factor ဆုရှင်မက်တယ်ရီနှင့်တွေ့နေသည်ဟူသောကောလာဟလများပျံ့နှံ့နေသည်။
Montana ၏အဆိုအရသူသည်မည်သူ့ကိုမျှတရားဝင်ချိန်းတွေ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်းနှင့်သူသည် Matt Terry နှင့်ချစ်ကြိုက်နေသည်ဟူသောကောလာဟလကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
နေသာစနေနေ့☀️ကျွန်ုပ်သည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သောမြက်ပင်အဖျားဟက်ကာအချို့လိုအပ်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်လား ?? ‍♀️
မျှဝေသည် Montana ဘရောင်း 9:50 pm တွင် PDT မှာဇွန် 2, 2018 ရက်တွင် (@ montanarosebrown1 @)
အဲလက်စ် - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ် (နေ့ ၅၀)
မျှဝေသည် တစ် ဦး က L ကိုအီး X ကို• B ကိုအီးတစ် ဦး က T က T ကငါအီး 1:59 pm တွင် PDT မှာမေလ 23, 2018 ရက်တွင် (@ alex.beattie @)
ငါအားလပ်ရက်လိုသည်။ အကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်ဖြင့်လာသည်။ ??
မျှဝေသည် တစ် ဦး က L ကိုအီး X ကို• B ကိုအီးတစ် ဦး က T က T ကငါအီး 9:26 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 4, 2018 ရက်တွင် (@ alex.beattie @)
Kem - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - အောင်မြင်သူ (နေ့ ၅၂)
Kem သည်ကျွန်းအားအောင်ပွဲရခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်ရှူရှိုက်ရန်ဒုတိယအကြိမ်မရသူဖြစ်ပြီးပြပွဲပြီးဆုံးချိန် မှစ၍ ၀ ယ်လိုအားအလွန်များနေသည်။
သူကအဖုံးအညွန့်ကနေ OK ကိုအတူအမျိုးမျိုးသောပြုမိ! Good Morning ဗြိတိန်ကိုတင်ပြရန်မဂ္ဂဇင်း။ ထို့အပြင်သူသည် 'Love Straight Out of Love Island' တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Kem သည် Dancing on Ice 2018. တွင်လည်းသူနှင့်သူ၏အဖော်အဖက်သည်ဆီမီးဖိုင်နယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Defo ပြန်ယူဆောင်? မက္ကဆီကိုမှ! Flamingnce မှာ Flamingo ကိုနည်းနည်းလေးမှေးမှိန်နေတာလား? @firstchoiceholidays နှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်အားလပ်ရက် #BraggageRights
မျှဝေသည် ခရင်မ် (@kemcetinay) :45ပြီ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင်ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် PDT
Kem သည်ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်း Chris Hughes နှင့်အတူတေးဂီတတီးခတ်ခဲ့သည်။ သူတို့က 'Little Bit of Leave It' ဇယားထိပ်ဆုံးမှသီချင်းကိုထုတ်လွှင့်နေကြသည်။ အတူတူအတူတူ, ထိုစုံတွဲသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြံ့ခိုင်ရေး DVD ကို (Chris & Kem 100% Fit) ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Kem သည်နေရာများတွင်ပြသရန်နှင့်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လက်မှတ်ထိုးရန်တစ်နာရီလျှင်ပေါင် ၅၀၀၀ အထိတရားစွဲဆိုထားသည်။
သူတကယ်လိုချင်သည်မှာ EastEnders တွင်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကဘီဘီစီမှာနာမည်ကြီးတွေကိုတောင်းစားတာကိုရပ်တန့်မသွားသေးဘူး၊ မကြာခင်မှာသူရပ်တော့မယ်မထင်ဘူး။
သူသည် Love Island ၏တရားဝင် podcast ('The Morning After') ၏ပူးတွဲအိမ်ရှင်ဖြစ်တော့မည့်အတွက် Kem ကိုသေချာနားထောင်ပါ။ podcast သည်နံနက်တိုင်းထုတ်လွှင့်ပြီးည၏လှောင်ပြောင်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်။
မျှဝေသည် ခရင်မ် 11:46 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 30, 2018 ရက်တွင် (@kemcetinay)
သူ Mike - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (နေ့ ၄၄)
Villa ကိုစွန့်ခွာပြီးကတည်းက Mike ဟာနေရာအနှံ့မှာရှိခဲ့သည်။ သူသည် 'Celebs Go Dating' တွင်ပြသခဲ့သည်။ Love Island ၌ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းသူမနှင့်မိန်းကလေးနှစ် ဦး ကိုနောက်ဆုံးပါတီတွင်သုံးယောက်မြောက်သားကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက Mike နှင့် Megan McKenna တို့သည်လူသိရှင်ကြားထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးသူတို့နှစ် ဦး သည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အလွန်ပျော်ရွှင်နေပုံရသည်။
သငျသညျအစဉ်အမြဲ @thecouture_club ၌ငါ့ကိုဖမ်းနိုင်? ငါတို့ရှိသမျှအဘို့အ Londoners အချို့သောသီးသန့်ဝယ်ယူဘို့သူတို့ရဲ့တနင်္ဂနွေ Shoreditch ၌မိမိတို့လန်ဒန် pop up စတိုးဆိုင်ထွက်စစ်ဆေး?
မျှဝေသည် သူ Mike Thalassitis 7:42 pm တွင် PDT မှာမေလ 18, 2018 ရက်တွင် (@mike_thala)
ဂျွန်နီ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ် (နေ့ ၃၈)
ပြပွဲမှထွက်ခွာပြီးနောက် Jonny သည်ချယ်လ်ဆီးကြယ်ပွင့် Stephanie Pratt တွင် Made ၌စတင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒီဟာကြာရှည်မခံခဲ့ဘူး၊ ဒါကိုရပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်စေတဲ့အကြောင်းအတိအကျမသိရသေးပါ။
အမှား .. ငါဘာလို့ဒီ shit ကိုပရဒိသုဘုံမှာထားခဲ့တာလဲ ☔️?
မျှဝေသည် Jonny Mitchell က 10:27 pm တွင် PDT မှာမတ်လ 28, 2018 ရက်တွင် (jonny_mitchell1991 @)
Marcel - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ်ခြင်း (နေ့ ၅၂)
ပြပွဲပြီးတဲ့နောက် Gabby နဲ့ Marcel တို့ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပုံရသည်။ အရာအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့သွားနေပြီးအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရွေ့လျားနေသဖြင့်သူတို့သည်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မေလမှာသူဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ် ရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့နေစဉ်ကိုးလသူ၏ရည်းစားအပေါ်လိမ်လည်လှည့် ။
ထိုအချိန်မှစ အလွန်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည် ကြောင်း Marcel ကသူ့ကိုကျော်ထွန်းလင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
@wearefstvl သည် #mint ကြီးသော @dmode_apparel ကိုလှုပ်ခါနေသည်။ Dmode ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သိုလှောင်ထားသောအရာကိုမြင်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းနေသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ #comingsoon #dmode #wearefstvl #xclsv
မျှဝေသည် Marcel Somerville 2:29 pm တွင် PDT မှာမေလ 28, 2018 ရက်တွင် (@marcel_rockyb)
Gabby - ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (နေ့ ၅၂)
ကိုးလကြာမာဆယ်လ်နှင့်အတူရှိပြီးနောက်သတင်းနှစ်ခုကြားမှကွဲထွက်သွားသည် Marcel ကသူမအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်တွင်သူမအားလိမ်လည်ခဲ့သည် ။
Gabby သည်သူမကိုယ်တိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသွင်အပြင်များနှင့်အလုပ်များနေသော်လည်းတစ်နာရီအတွင်းပေါင် ၅၀၀၀ ၀ န်းကျင်အားသွင်းနေရသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီညငါတို့အားလုံးစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည့်ညပဲ! ❤️? ငါသည်သင်တို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ်ငါ့အကြံအစည်ပေးရန် @ boohoo ရဲ့ Instastories လွှဲပြောင်းတာပါ! 8:45 pm BST ကနေထွက်စစ်ဆေးပြီးတော့မင်းရဲ့အကြံအစည်တွေကိုမင်းသိအောင်သေချာလုပ်ပါ။ အိုးမျှော်လင့် !!!! ? #loveisland
မျှဝေသည် GABBY Allen ?? ‍♀️ 12:01 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 4, 2018 ရက်တွင် (@gabbydawnallen)
ဂျေမီ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - အပြေးသမား (နေ့ ၅၂)
ဂျေမီသည်အချစ်ကျွန်းမှထွက်ခွာသွားချိန် မှစ၍ ကေးမာလာနှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးသည်ကြီးထွားလာသည်မဟုတ်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်ဒုက္ခသည်စခန်းသို့အတူတကွသွားရောက်လည်ပတ်ရန်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာတွင်ရှိသည်။
BAFTA Scotland Awards @carlopaloni အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ #throwback #bafta @bafta
မျှဝေသည် ဂျေမီ Jewitt 9:27 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 11, 2018 ရက်တွင် (@jamiejewitt_)
ဂျေမီသည်စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သော်လည်းကေးမာလာသည်သူ့အတွက်လမ်းစဉ်တိုင်းရှိခဲ့ကြောင်း ၀ န်ခံခဲ့သည်။ သူသည်ယနေ့သူမနှင့်သူမ၏အကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့မပါဘဲသူမဖြစ်မည်ကိုကျေးဇူးတင်စွာဝန်ခံသည်။
အခြားကျွန်းသူကျွန်းသားများက Jamie နှင့် Camilla တို့ရုန်းကန်နေရသည်ဟုသတင်းများထွက်နေသော်လည်းဂျေမီသည်ဤကောလာဟလများကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူနှင့်သူမနှင့် Camilla ဆီသို့မနာလို ၀ န်တိုမှုဖြင့်သာဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
သင်မမောင်းနိုင်လျှင်။ မှီခိုပါ။ ? #reiss #tailoring #retouched
မျှဝေသည် ဂျေမီ Jewitt 10:26 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 6, 2018 ရက်တွင် (@jamiejewitt_)
Dom - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ် (နေ့ ၂၈)
ကျွန်းမှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ဒိုနှင့် Jess ၏ဆက်ဆံရေးသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သူတို့သည် Devon တွင်အတူတကွပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးယခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ရန်အစီအစဉ်များရှိသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလကကျင်းပခဲ့သော Good Morning ဗြိတိန်တွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောတရားဝင်မဟုတ်သောမင်္ဂလာပွဲပြီးနောက်သူတို့ပြောခဲ့သည့်မင်္ဂလာပွဲအတွက် Mykonos တွင်နေရာတစ်ခုကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
ထွက်အလုပ်လုပ်ကောင်းသောအစားအစာရဲ့ roll လှိမ့်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ကုန်အံ့?
မျှဝေသည် Dominic လီဗာ 10:28 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 4, 2018 ရက်တွင် (@domlever)
Theo - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ် (နေ့ ၄၁)
Theo သည် ၂၀၁၇ စီးရီးများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်တွစ်တာတွင်သူ၏နောက်လိုက်များကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့သည်။
သူဒီလိုပြောတယ် - 'ငါဒီအချိန်ကိုသွားရင်ငါတကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာမယ်'
သူမပိုပူလာတဲ့အခါ - @lordtimepieces မှစောင့်ကြည့်ပါ THEO10 လျှော့စျေးကုဒ်ကိုယခု ၁၀% လျှော့။ #spon #LordTimepiece #ad
မျှဝေသည် ???? ???????? 11:00 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 15, 2018 ရက်တွင် ((theo_campbell91 @)
အကယ်၍ ၎င်းသာမှန်ခဲ့ပါကပြသခြင်းသည်သူ၏ Insta, Twitter နှင့်အားကစားခန်းမများမှ လွဲ၍ ပြီးခဲ့သည့်ပြပွဲမှပြသခဲ့သည်မှာသူသည်ထုတ်လုပ်သူများကိုသူထပ်မံကြိုးစားသင့်သည်ဟူသောအချက်ကိုပြရန်အတွက်လုံးလုံးမလုပ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်။
အမှန်စင်စစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Love Island မှာဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်အများပြည်သူ Theo ပြန်လာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်။
သူမအတွက် Maxi စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့် hooped ပုတီးတယ်တဲ့အခါမှာ .. ? #Jeeze - - - #instapicoftheday #summervibes
မျှဝေသည် ???? ???????? 7:02 pm တွင် PDT မှာမေလ 22, 2018 ရက်တွင် (@ theo_campbell91)
ဆမ် - ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်း၊ စီးရီး ၃ - စွန့်ပစ် (နေ့ ၂၃ နှင့် ၄၆)
ဆမ်သည်လူကြိုက်များသောပြိုင်ပွဲဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဘွတ်ဖိနပ်အပြီးတွင်ပြည်သူလူထုကပြန်လည်ပြသခဲ့ပြီးမဲဆန္ဒနယ်နှစ်ခုလုံးကိုအိမ်ပြန်ပို့ခဲ့သည်။
သူနဲ့ဂျော်ဂျီယာ Harrison တို့မှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါသူတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဆက်ပြီးတွေ့နေကြပေမယ့်သူတို့ကကွဲသွားကြတယ်။
ကျွန်းမှထွက်ခွာချိန် မှစ၍ ဆမ်သည် Toon သို့ပြန်လည်သွားရန်နှင့် Geordie Shore မျိုးနွယ်စုများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ယခုသူချိန်းတွေ့သည် Chloe ကူးတို့ နှင့်လုံးလုံးနောက်တဖန်တစ်မြောက်ပိုင်းအဖြစ်ဘဝကိုခံစားနေသည်။
@thecouture_club ရေကူး ၀ တ်စုံနှင့်လျှောစီးများဖျားနေပါသလား။
မျှဝေသည် ဆမ် Gowland 11:18 pm တွင် PDT မှာမေလ 31, 2018 ရက်တွင် (@samgowland)
ကြိုက်တယ် ဒီစာမျက်နှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်းအားလုံးဟာမင်းအတွက်နဲ့မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေအကြောင်းစိတ်ကူးနိုင်ခဲ့ကြပြီ။
● ငါတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း၏ကင်မီးလ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောရတနာအသစ်နှင့်မထိုက်တန်သည့်အကြောင်းပြချက်အားလုံး
# ပဟေizိ - Love Island ကိုရနိုင်မလား။
●ဒီကျွန်းပေါ်ရှိ Love Island 'ထုတ်လုပ်ရေးသမ္မာကျမ်းစာ' သည်ပြသပုံသည်မည်မျှခိုင်မာကြောင်းဖော်ပြသည်